Ny Bluetooth 5 dia mampitombo ny hafainganam-pandehan'ny famindrana ary maro hafa | Androidsis
Nanambara Bluetooth 5 miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo roa heny, inefatra ny fandrakofana ary 800% ny fahafaha-manao bebe kokoa
Miaraka amin'ny ny fiakaran'ny fitaovana 'mifandray' Koa satria ny ankamaroan'ny mampiasa ny fifandraisana Bluetooth, dia mila fanatsarana lehibe ny fahaizany, ny hafainganana ary ny fandrakofana isika mba tsy hijaly be ny finday avo lenta finday rehefa tsy maintsy ampifandraisintsika amin'ny iray amin'ireo fitaovana azo entina izay azontsika fantarina amin'ny smartwatch na bracelet momba ny hetsika.
Bluetooth SIG dia nanambara a kinova vaovao an'ny protokolà tsy misy tariby izay tonga hampiakatra avo roa heny ny hafainganan'ny famindrana, amin'ny inefatra ny fandrakofana sy ny fahafaha-manao 800%. Ankoatry ny fanatsarana ity andian-toetra mampiavaka ity amin'ny fampifandraisana an'ity karazana ity, dia misy koa ny "Beacons" na fanilo azo ampifandraisina amin'ny fitaovana rehetra handefasana vaovao.
Ho tonga ny Bluetooth 5 faran'ny 2016 na tamin'ny fiandohan'ny 2017 Ary raha fintinina, dia ho tsara kokoa amin'ny endriny rehetra miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny famindrana namboarina roa, ny fandrakofana dia nohatsarain'ny efatra ary ny fahafaha-mamoaka angon-drakitra dia nitombo 800%. Ny dikan'izany dia ny Bluetooth 5 hamela fitaovana isan-karazany hahafahany mifampiresaka tsara kokoa rehefa ao an-trano sy any ivelany ary eny amin'ny rindrina mihitsy aza.
Azontsika atao koa ny mampiditra ireo toetra rehetra ireo a fanatsarana ny fahombiazany ary fotoana fiandrasana kely kokoa. Ny iray amin'ireo teboka ratsy amin'ity karazana fifandraisana eo amin'ny fitaovana ity dia ny hoe miadana tokoa ny famindrana rakitra misy lanja iray. Izay hitarika antsika amin'izany ihany koa fa rehefa ampiarahina amin'ny fitaovana marobe dia tsy ho hitantsika ireo fanapahana ireo ao amin'ilay fifandraisana.
Karazana fifandraisana manan-danja ka ny vokatra rehetra izay tokony ampiarahina amin'ny telefaoninao dia mahazo varotra tsara kokoa ary hivelatra hatrany mba hahafahantsika hampiasa azy ireo, satria ny ankamaroany dia miankina amin'ny Bluetooth. Ka ny Bluetooth 5 dia antenaina toy ny rano Mey manatsara ny Internet amin'ny zavatra, iray amin'ireo toerana anaovan'ny orinasa maro ezaka sy fampiasam-bola be.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Nanambara Bluetooth 5 miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo roa heny, inefatra ny fandrakofana ary 800% ny fahafaha-manao bebe kokoa
[ROOT] Ahoana ny fametrahana Samsung Galaxy S7 Game Launcher amin'ny Samsung Galaxy S6